ESI JIKỌỌ DISKI IKE NA KỌMPUTA MA Ọ BỤ LAPTỌỌPỤ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Esi jikọọ diski ike na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Ijikọ na diski ike na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa abụghị ihe siri ike, Otú ọ dị, ndị na-ahụtụbeghị ya nwere ike ọ gaghị ama otu esi eme ya. N'isiokwu a, m ga-agbalị ịnwale nhọrọ niile ọ bụla maka ijikọ diski diski - ma na-abanye na laptọọpụ ma ọ bụ na kọmputa, na ntanetị nhọrọ njikọ ọzọ iji degharịa faịlụ ndị dị mkpa.
Hụkwa: otu esi kesaa diski diski
Ijikọ na kọmputa (n'ime usoro usoro)
Ụdị kachasị nke ajụjụ a jụrụ bụ otu esi jikọọ diski ike na usoro kọmputa. Dị ka a na-achị, ụdị ọrụ ahụ nwere ike izute ndị na-ekpebi ikpokọta kọmputa na ha, dochie draịvụ ike, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka edere data dị mkpa na diski ike nke kọmputa. Nzọụkwụ maka njikọ dị otú ahụ dị nnọọ mfe.
Ịchọpụta ụdị diski ike
Mbụ, lelee diski ike ị chọrọ ijikọ. Ma chọpụta ụdị ya - SATA ma ọ bụ IDE. Kedu ụdị diski ike ị nwere ike ịhụ site na kọntaktị maka ike ọkọnọ na interface nke motherboard.
IDE (aka ekpe) na sATA ike draịva (nri)
Ọtụtụ kọmputa (yana kọmputa dị larịị) jiri SATA interface. Ọ bụrụ na ị nwere ochie HDD, nke a na-eji busị IDE, mgbe ahụ, ụfọdụ nsogbu nwere ike ibili - ụgbọ ala dị otú ahụ na motherboard nwere ike ị gaghị efu. Ka o sina dị, a edozi nsogbu ahụ - ọ bụ iji zụta ihe nkwụnye si IDE ka SATA.
Kedu na ebe ị jikọọ
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, ọ dị mkpa ime naanị ihe abụọ iji rụọ diski ike na kọmputa (ihe niile a na-eme mgbe kọmputa ahụ kwụsịrị ma wepu mkpuchi) - jikọọ ya na ike na SATA ma ọ bụ IDE data bus. Ihe na ebe ejikọ ka egosiri na foto dị n'okpuru ebe a.
Jikọọ draịvụ IDE siri
SATA ike mbanye njikọ
Lezienụ anya na wires site na ọkụ ahụ, chọta onye ziri ezi maka draịvụ ike ma jikọọ ya. Ọ bụrụ na nke ahụ apụtaghị, enwere ike mgbanwe IDE / SATA. Ọ bụrụ na e nwere ụdị ọrụ abụọ dị na diski ike, ọ bụ iji jikọọ otu n'ime ha.
Jikọọ motherboard na draịvụ ike site na iji waya SATA ma ọ bụ IDE (ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ draịvụ ike ochie na kọmputa ahụ, ị ​​nwere ike ịchọ nkwụnye ọkụ). Ọ bụrụ na draịvụ a bụ diski ike abụọ na kọmputa ahụ, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na a ga-azụta USB ahụ. N'otu njedebe ọ na - ejikọta na njikọ kwekọrọ na motherboard (dịka ọmụmaatụ, SATA 2), na njedebe ọzọ na njikọ nke diski ike ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ draịvụ ike site na laptọọpụ na desktọọpụ desktọọpụ, a na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ, n'agbanyeghị oke dị iche - ihe niile ga-arụ ọrụ.
A na-atụ aro ka idozi hard drive na kọmputa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya ruo ogologo oge. Ma, ọbụnadị mgbe ị dị mkpa ka ịdegharịa faịlụ ahụ, ahapụla ya na ngwugwu, nke na-enye ya ohere ịgbanwe mgbe ọ na - arụ ọrụ - mgbe diski ike nọ n'ọrụ, a na - emegharị vibration nke nwere ike ibute ọnwụ nke wired jikọtara na njọ nke HDD.
Ọ bụrụ na ejikọta diski ike abụọ na kọmputa, mgbe ahụ, ọ ga-adị mkpa ịbanye na BIOS iji hazie usoro buut ka sistemụ arụmọrụ dị ka ọ dị na mbụ.
Esi jikọọ diski ike na laptọọpụ
Nke mbụ, Achọrọ m ịmara na ọ bụrụ na ị maghị esi ejikọta diski ike na laptọọpụ, mgbe ahụ, m ga-atụ aro ị kpọtụrụ nnabata kwesịrị ekwesị maka nrụpụta kọmputa bụ ọrụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa nke ụdị ultrabooks na Apple MacBook laptọọpụ. Ọzọkwa, ị nwere ike jikọọ draịvụ ike ahụ na laptọọpụ dịka HDD na-apụ, dị ka a ga-ede n'okpuru ebe a.
Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ijikọta diski ike na laptọọpụ maka ebumnuche nke iji dochie anya adịghị mfe. Dịka iwu, na laptọọpụ dị otú ahụ, site na ala, ị ga-ahụ otu "okpuru" abụọ na atọ nke a kpara na kposara. N'okpuru otu n'ime ha bụ draịvụ ike. Ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ dị otú ahụ - n'enweghị nsogbu ị ga-ewepụ ụgbọala ochie ahụ na wụnye ihe ọhụrụ, nke a na-eme elementary maka ọkọlọtọ 2.5 nke anụ ọhịa ahụ na-arụ ọrụ na SATA interface.
Jikọọ draịvụ ike dị ka ụgbọala mpụga
Ụzọ kachasị mfe iji jikọọ bụ iji jikọọ diski ike na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ dị ka ụgbọala mpụga. A na-eme nke a site na iji nkwụnye kwesịrị ekwesị, nkwụnye ọkụ, ihe mkpuchi mpụga maka HDD. Ọnụahịa ndị dị otú ahụ na-eme mgbanwe adịghị elu ma adịkarịghị karịa 1000 rubles.
Ihe ọrụ nke ngwa ndị a niile bụ otu ihe - a na-eji voltage dị mkpa na draịvụ ike site na nkwụnye ahụ, njikọta na kọmputa ahụ site na interface USB. Usoro dị otú ahụ adịghị egosi ihe ọ bụla dị mgbagwoju anya ma ọ na-arụ ọrụ dị ka ihe nkiri kọmputa. Naanị ihe bụ na ọ bụrụ na eji diski ike dịka onye dịpụrụ adịpụ, ọ dị oke mkpa iji mkpochapụ nke ngwaọrụ ahụ ma gharakwa gbanyụọ ike mgbe ọ na - arụ ọrụ - nwere nnukwu ihe ịga nke ọma nke a nwere ike imebi emebi diski ike ahụ.